Iingcebiso eziphosakeleyo ezivela kwi-Semalt On Indlela yokukhusela umyalezo wokuthumela umyalezo kwi-Files Log Log
Eyaziwa nangokuthi i-spam log, i-spam yokuthumela i-spamdexing ubuchule obubandakanya ukwenza izicelo ezininzi zesayithi usebenzisa i-URL yokubamba i-fake. Abakwa-Spammers basebenzisa ii-URL zokufakela ezikhohlisayo ukuthumela izicelo kwiisayithi abafisa ukuvakalisa. Ekuhambeni kwexesha, abagaxekile baphela ekufumaneni imali eninzi malunga nemali yentengiso.
U-Ivan Konovalov, i-12 (Semalt uMphathi weNtengo yabaThengi, uthi kwihlabathi lanamhlanje lomxholo kunye nokuthengiswa kwe-digital, inani eliphakamileyo le-spam yokubhekiselela le-spam libikwa imihla ngemihla. Emva kokujoliswa kweefayili zakho zelogi, ugaxekile wenza iifayile zakho zegciwane zingenanto kwaye zingenanto. Xa kuziwa ekuthengiseni idijithali, iifayile zelogi zidlala indima ebalulekileyo ngokuncedisa i-webmasters ukuhlalutya inani labathengi bavakashela indawo yabo kunye nexesha lexesha leseshoni - best replica watch makers.
Usebenza njani ugaxekile logaxekile
Ukuthathwa kweGoogle kwi-spam yokudlulisa kubonakala. Ukuba ubhalwe njengendlela yokwenza umnyama omnyama, i-Google ihlawulisa i-webmasters kunye neeblogi ezixhaphaza ukuthumela ugaxekile ekunyuseni i-traffic kwiiwebhsayithi zazo kunye nezinga eliphezulu kwi-algorithms ye-injini yokukhangela. Kwiminyaka edlulileyo, ezinye iibloggers kunye ne-webmasters babonakalisa ukuthunyelwa kwiphepha kwiiwebhusayithi zabo. Ngenxa yesizathu esaziwayo kwiiblogi, uludwe lwabathenjwa kutshanje lube yinxalenye ebalulekileyo yeendawo ezininzi.
Iingcambu ziqokelela umxholo wamaphepha awatyelela imihla ngemihla ngokuchonga. Inani elincinci leenjini zogqirha zisebenzisa i-link yolwazi ukuthandwa kwiiwebhusayithi zokuguqula amagama angundoqo. I-Webmasters kunye neeblogi zixhaphazela imeko ecinga ukuba i-URL yokudlulisa idibanisa iqhotyoshelweyo kumxholo wayo ineza into ebalulekileyo yexabiso..Ngenjongo yokwandisa izithuthi kwiindawo zabo, abathengisi basebenzisa isofthiwe ukutyelela amaphepha kunye namaziko ngokusebenzisa i-header fake header.
Iindwendwe ezikhohlakeleyo zivakalisa iingxelo ezichaza indlela abasebenzisi abanokufumana ngayo iphepha, ixesha leseshoni, kunye nenani leendwendwe zangempela ezifunyenweyo. Njengomthengisi, unokugqiba ukubona i rankings yakho iyancipha ngokukhawuleza ngenxa yokusebenzisa spam log. Kwiimeko ezininzi, i-Google isusa ngokupheleleyo i-webmasters isebenzise amacebo amacandelo omnyama kunye namasu avela kwi-rankings yejini injini.
Ukususa i-spam yokudlulisela kwiifayile zelog
Ukusebenzisa ingeniso engabonakaliyo yokubhala
I-Webmasters kunye nabathengisi bokuqukethwe banamasu abo abathandayo bokususa ugaxekile wokuthumela. Ukusebenzisa i-log engabonakaliyo yokungena kwelogi yinto elula kunazo zonke. Ungabonakali okanye uquka abathumela kuwo onke amaphepha afumaneka kwiwebhusayithi yakho. Ngokuhluleka ukuquka ugaxekile wokudlulisela kumaphepha akho ewebsite, iinjongo zokusesha ziya kufundiswa ukuba zihoxise igogi yakho yokuthumela.
Ukusebenzisa ifayile .htaccess
Ukuba ufumene i-URL enokukrokra kwiwebhusayithi yakho, cinga ukunika ifayile yefayile yokucoca ifowuni. Le fayile yokucwangcisa i-blacklists kunye neebhloko ze-log spam kwiwebhusayithi yakho. Ukuqhuba ifayile ye -htaccess kwisayithi lakho, sebenzisa i-Apache ngokubhala kwakhona. I-Webmasters isebenzisa iifayile .htaccess ngokukhawuleza ukuvimba ugaxekile ovela kwi-porn, ukugembula, imali okanye nayiphi na indawo ethile.
Amanye amacandelo aphuhlisiwe ukuze ancede abasebenzisi beeblogi kunye nabathengisi be-block spam yokuthumela. Udibaniso lwefayile yokucwangcisa i-htaccess kunye nelogi engabonakaliyo lokuthunyelwa kwelogi lisebenza ngokugqibeleleyo kubaninzi be-webmasters kunye nabathengisi be-digital. Ungavumeli igaxeji zokudlulisa ukunikezela iifayile zakho zelog. Sebenzisa iindlela ezichazwe ngasentla ukuvimba ugaxekile wokuthumela.